Guri — Ohio Department of Job and Family Services U bood waxyaabaha ugu waaweyn
Waaxda Dhexe ee Diiwaangelinta Aabannimada
Waa maxay isbeddelka aabuhu sameeyo
Fadlan booqo boggayaga internetka si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan barnaamijka iyo macluumaadka muhiimka ah ee laga yaabo inaad u baahato.
Waa maxay Barnaamijka Fursadaha Aabanimada?
Waaxda Dhexe ee Diiwaangelinta Aabannimada (CPR) waa barnaamij ah Xafiiska Taageerada Ilmaha ee Waaxda adeegyada Shaqada iyo Qoyska ee Ohio, oo bixinaya aasaasidda xarumaha aabbanimada, waxbarashada, tababbarka, hagidda, qiimeynta iyo caawimaadda farsamooyinka ku dhallidda isbitaallada, diiwaangeliyaasha deegaanka, xafiisyada fulinta ee taageerada caruurta, maxkamadaha, lskaashatayaasha bulshada iyo waaliddiinta aan guursan. Barnaamijku diiraddiisu ayaa ah in la dhiirigeliyo aasaasidda aabbanimada ikhtiyaariga ah si loo hubiyo in carruurta Ohio ay leeyihiin aabeyaal si sharci ah loo aqoonsan yahay iyo taageerada dhaqaalaha iyo dareenka ee ay dhammaan carruurta u baahan yihiin ooyna u qalmaan.
Guudmarka Aasaasidda Aaabannimada
Aabannimada 101 – Fiidiyowga loogu talagalay waalidiinta
Aasaasidda aabannimada ayaa muhiim u ah caruurta iyo waaliddiintooda. Dhammaan waalidiinta aan guursan waa inay ka fekeraan aasaasidda aabannimada — sababtoo ah dhamaan caruurta waxay uqalmaan inay helaan faa'iidooyinka ee aabeyaalka si sharci ah loo aqoonsan yahay ay bixin karaan. Haddii aadan isqabin marka ilmahaagu dhasho, ilmahaagu ma laha aabbo sharci ah. Magaca aabaha laguma qori doono shahaadada dhalashada ilaa waalidiintu ay u aasaasaan aabbo sharci ah. Haddii hooyadu la qabo, ninkeeda ayaa loo qaadanayaa inuu yahay aabaha.
Aasaasidda aabanimada waxay siineysaa labada waalid iyo ilmahooda xuquuqda iyo fursadaha ay u baahan yihiin una qalmaan. Waa wax fudud oo bilaash ah. Qirashada Dhaarta Aabbanimada (JFS 07038) ayaa la dhammeystiri karaa si loo aasaaso aabbanimada wakhtiga dhalashada ee isbitaalka ama ka dib ee goobta diiwaangeliyaha deegaanka (waaxda caafimaadka) ama hay'adda fulintaTaageerada Caruurta ee degmada.
Waaxda Dhexe ee Diiwaangelinta Ohio (CPR)
Waaxda adeegyada Shaqada iyo Qoyska ee Ohio (ODJFS)
→ Booqo Bogga Intarnetka
Waaxda Caafimaadka ee Ohio
Su’aalaha Muhiimka ah ee soo-noqnoqda
+ Sideen aabannimada ugu aasaasaa ilmahayga?
+ Eeg dhammaan su’aalaha soo-noqnoqda
Isku-xirka Ilaha Muhiimka ah
→ Waaxda Adeegyada Shaqada iyo Qoyska ee Ohio/Xafiiska Taageerada Caruurta - macluumaad ku saabsan Taageerada caruurta.
→ Waaxda Caafimaadka Ohio - macluumaad ku saabsan shahaadooyinka dhalashada
→ Sharciga Ohio - si loo tixraaco sharciga Ohio ee la xiriira aasaasidda aabanimada ama waxyaabo kale oo xiiso leh
→ Xeerka Ohio ee dib-loo-eegay - in la eego Xeerka Ohio ee dib-loo-eegay